अ’ष्ट्रेलियामा भाडा माझेर मैले के बिराए ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअन्तरास्ट्रियअ’ष्ट्रेलियामा भाडा माझेर मैले के बिराए ?
अ’ष्ट्रेलियामा भाडा माझेर मैले के बिराए ?
मनोज बिँडारी– अष्ट्रेलिया आउने नेपाली स्टुडेन्टहरुको बारेमा आजकाल निक्कै ट्रोलहरु बनाएको देखिन्छ । ती अधिकांशमा भाँडा माझ्ने भनेर खिसी गरेको देखिन्छ ।“भाडा माझ्ने“ भनेर बिल्ला गर्ने साथीहरुले सोच्नुपर्छ कि स्टुडेन्ट लाइफ कहिपनि सजिलो हुदैन भनेर । आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिदा हाँसोको पात्र बनाइन्छन् कसैले भने तिनीहरु आफैं मूर्ख हुन् ।
फेरि काम गर्नेहरु कहिल्यौं सानो हुँदैनन् । हल्लेर हिड्नेहरु पो को ठूला भएका छन् र ?अष्ट्रेलियामा आएका नेपाली मात्र हैन सबै देशका स्टुडेन्टहरुले केही न केही काम गरेर आफ्नो ट्युसन फि तिरिरहेका हुन्छन् ।यिनै भाडा माझ्नेहरुहरुले भोलि स्टुडेन्ट लाइफ सकेपछि जुन प्रगति र उन्नति गर्छन्,त्यो देखेर अहिले हाँसोमा उडाउँने व्यक्तिहरु आफैं दंग पर्नेछन् ।
किनभने यी भाडा माझ्नेहरुले कामको महत्व बुझेका छन् र काम गरेर फल पनि पाउछन् । नेपालीहरुमा काम सानो र ठूलो भनेर छुट्याउने परम्परा नै गलत छ ।सोचौं त तपाई हामी हिड्ने सडक कसैले सफा गरिदिएनन् भने के होला ? तपाईं हामी घुम्ने गार्डेनमा कसैले फूल रोपिदिएनन् भने त्यहाँ रंगीविरंगी फूल कसरी फुल्छन् ?
तपाईं हामीले फालेका फोहरमैला नगरसेवकहरुले घिन मानेर उठाइदिएनन् भने सहर कस्तो होला ? तपाईं हामी बस्ने होटेलहरुमा कसैलेसरसफाइ गर्दिएनन् भने के होला ?तपाई हामी हिड्ने सडक कसैले सफा गरिदिएनन् भने के होला ? तपाईं हामी घुम्ने गार्डेनमा कसैले फूल रोपिदिएनन् भने त्यहाँ रंगीविरंगी फूल कसरी फुल्छन् ?
तपाईं हामीले फालेका फोहरमैला नगरसेवकहरुले घिन मानेर उठाइदिएनन् भने सहर कस्तो होला ? तपाईं हामी बस्ने होटेलहरुमा कसैलेसरसफाइ गर्दिएनन् भने के होला ?भाडा माझ्नेहरु तपाईहरुको नजरमा त्यति नै तल्लो स्तरको हो भने तपाईले घरमा खाना खाएपछि भाडा माझ्दिने तपाईको आमा, दिदी, बहिनी वा श्रीमतीलाई कुन स्तरमा राख्नुहुन्छ ?
त्यसैले श्रमको सम्मान गर्न सिक्नुहोस् । आफ्नो काम गर्दिनेलाई स्यावासी दिन र धन्यवाद भन्न सिक्नुहोस् ।बाबु आमाले कमाइदिएको सम्पत्ति लाजै नमानी खर्च गर्दा आफूलाइ ठूलो मान्ने कि मिहिनेत गरेर आफ्नो पौरखमा उभिने कुरालाइ ठूलो मान्ने ?पढेलेखेकाहरुले काम गर्न हुन्न, घुम्ने कुसीमा बसेर मात्र बस्नुपर्छ भन्ने बुझाइ नै गलत छ ? किनभने अब त नपढेका मान्छे नै को होलान् र ?